China Isina-yakarukwa 3ply Inorasa Kuvhiya Chiso Mask vagadziri uye vatengesi | Hemeikaineng
Musiyano uripo pakati peakajairwa masiki uye masks ekuvhiya ekurapa. Masks akajairika anowanzogara maawa mana kusvika matanhatu. Iyo nguva yekushandisa masks ekuvhiya yakareba kupfuura iyi, asi kuchengetedza kushanda kwakanyanya kwakakwira. Kana paine kuvhiyiwa munguva dzakajairwa Kana paine njodzi yekutapukirwa muhukama hwepedyo, zvinowanzokurudzirwa kushandisa masiki ekuvhiya kana masiki ekudzivirira. Masks anoraswa asingabereki anonyanya kushandiswa kwehupenyu hwezuva nezuva uye kuchengetedzwa kwemazuva ese.
Iyi mask inofarirwa zvakanyanya nevatengi pasi rese, uye vatengi vakawanda vanotibata kuti titenge zvakawanda. Zvigadzirwa zvedu ndezvemhando yakanaka uye mutengo wakakodzera kunaka. Kana iwe uchida samples, unogona kutibata isu kutanga, tinogona kukupa samples kuti utarise mhando.
Material: 3S jira risiri rakarukwa* 2+99% jira rakanyungudutswa
Packaging Detail: 10 zvidimbu / bhegi, 1000pieces / katoni kana 50pieces / bhokisi
Muenzaniso: Havana mbereko/isina mbereko
Sterilization nzira: Ethylene oxide sterilization
Maitiro: EN14683:2019 Type IIR
Zuva rekupera 2 years
Zuva Rokugadzira: Ona chisimbiso
1. Unyoro hwekunyura layer: Sanitary giredhi polypropylene adhesive uchapupu jira; Sefa layer: Yakanyanya kushanda sefa yakanyungudutsa jira rekupfapfaidza; Iyo isingapindi mvura layer: Sanitary giredhi polypropylene adhesive proof jira.
2. Elastic ear loop: Yakasununguka kupfeka.
3. Iyo inogadzirika mhino tambo yakasununguka inochinjika kukotama.
2. Zvigadzirwa zvakapfuura CE, FDA, ISO certification.
Zvakapfuura: Isina-yakarukwa 3ply Disposable Medical Face Mask
Zvinotevera: Disposable Medical Anti-fog Anti-splash Face Shield
Face Mask Kuvhiya Kunoraswa
Face Mask Kuvhiya Kunoraswa 3 Ply
Face Mask Kuvhiya Kunoraswa 3 Plys
Patani Yekuvhiya Chiso Mask
Kuvhiya Kunoraswa Kumeso Mask
Kuvhiya Chiso Mask